Cryptopay Debit Card Review - Bitcoin Card Comparison 2018
Cryptopay manome fomba mora mandany ny BitCoins maneran-tany. Ireo mpampiasa dia afaka mandray soa avy amin'ny tombony ny bitcoin tambajotra raha fandikan-teny sy ny fanamorana vola hedging manohitra tsena hetsika. Ny tolotra natolotry ny Cryptopay manome ny mpampiasa haingana sy mampahazo aina ny fidirana amin'ny bitcoin vola. Ny VISA debit karatra navoakan'ny orinasa dia tsy maintsy hiatrika amin'ny bitcoin oharina fa ny olona afaka mampiasa ny fividianana amin'ny aterineto na avy amin'ny ATM withdrawals.
Nanome tolotra Cryptopay
Ireo mpampiasa dia afaka mividy, mivarotra sy ny fitehirizana BitCoins in Cryptopay ny bitcoin kitapom-batsy amin'ny Flex kaonty. Rehefa avy mampifandray ny kaonty any amin'ny banky ny sehatra, mpampiasa dia afaka niova fo EUR, GBP na USD oharina ho BitCoins. Ny kitapom-batsy dia natao amin 'ny fomba tsy handefa ny mpanjifa mitahiry ny vola isan-karazany ao anatin'ny iray ihany vola kaonty. Izany no mahatonga nandefa sy fandraisana vola avy any ivelany mampahazo aina be traikefa kokoa.
Cryptopay VISA olana debit karatra mba hanolotra ivelan'ny aterineto fandaniana fahafahana ho an'ireo fividianana BitCoins. Ny karatra dia ekena mihitsy ny terminal pos izay VISA karatra dia nanaiky. Midika izany mpanjifa dia afaka mandoa na amin'ny aterineto na ivelan'ny aterineto ao amin'ny mpivarotra an-tapitrisany eran-sakany. Ankoatra ny nentim-paharazana izay manana karatra VISA sy ny poti-Pins, mpampiasa koa levitra virtoaly karatra, izay nanaiky ho betsaka toy ny karatra plastika.
Ny fitantarana mizana dia azo nofaranan'ny paikady ny amin'ny kaonty banky tsotra famindrana. Bank afaka ao anatin'ny tantara ny 28 SEPA firenena any Eoropa, fa ny karatra dia azo baiko ivelan'ny Eurozone koa. Amin'izao zava-misy izao, mpanjifa tany Etazonia na ny India dia tsy afaka hanafatra ny debit karatra navoakan'ny Cryptopay. Ankoatra ny United States, ny orinasa navahan'i fanampiny 120 firenena amin'ny asa, anisan'izany ny firenena roa any Afrika sy ny Afovoany-Atsinanana.
Ny VISA debit karatra dia alefa iraisam-pirenena maimaim-poana, raha ny fanompoana ny fitsipika dia nofantenana. Araka ny lamin atao amin'ny alalan'ny tranonkala, mpanjifa mandray ny debit karatra ao anatin'ny 2-3 herinandro tany Eoropa sy 3-5 herinandro eo ny sisa amin'ny teny. Raha toa ny safidy mazava fanaterana no voafidy, mpanjifa dia afaka handray ny baiko ao anatin'ny karatra 3-10 andro ho efa tafahoatra ny sarany 75 USD.
Pricing sy ny Fees
Plastic vidin'ny karatra 15 USD, karatra virtoaly dia 2.5 USD. Ny karatra plastika Wikibolana, mamela ny mpampiasa azy hiala isan'andro 2,000 USD avy amin'ny ATM, ary misy 10,000 USD tokana ambony fari-dehibe. Na izany aza tsy misy fetra na ny fitambarany withdrawals, na amin'ny ambony ny vola amin'ny pamatrarana ny fifandanjana.
Cryptopay manatitra azy ny mpampiasa base ny safidy hampiasa ny tolotra tsy misy fanamarinana koa. Raha izany anefa ny fetra ho an'ny ATM withdrawals sy ny topups dia be kelikely kokoa. Mpampiasa tsy voamarina dia mety hiala 400 USD isan'andro isan'andro avy any ATM, fa tanteraka afa-tsy habetsahan'ny 1,000 USD nandritra ny androm-piainany ny fidirana.
Ho an'ny mpampiasa voamarina sy voamarina, mpanjifa dia afaka hiala vola avy amin'ny ATM in-roa monja isan'andro. Amin'ny lafiny iray hafa, roa karazana mpampiasa afaka mampiasa karatra Cryptopay debit tsy manam-petra fotoana fividianana an-tserasera.
Cryptopay fiampangana 1% rehetra bitcoin fiovam-po avy sy eo an Fiat vola. Ny fomba mora indrindra dia ny hampidiran'izy ny tantara fifandanjana amin'ny on-toerana Cryptopay Loading fitaovana, fa raha izany, ny sehatra nasain'i fanampiny 0.99% noho ny fampiasana ny tolotra antoko fahatelo-. Fa mampidina entana avy karatra misy sarany fanampiny ny $ / € / £ 0.10 afa-tsy ny 1% Mampianiana.
Ireo mpampiasa dia tsy maintsy mihaino-pototry vola ny Cryptopay karatra toy ny misy fanampiny 3% ananarako amin'ny vahiny varotra. Raha ny mpanjifa te handoa na hiala vola amin'ny vola hafa noho ny vola pototry ny karatra ity 3% raharaham-barotra any ivelany saran'ny dia nandidy.
Ny sarany ny ATM withdrawals an-toerana sy iraisam-pirenena ho an'ny varotra ao euro dia mitovy € 2.25. Na izany aza, raha ny base vola ny Cryptopay karatra Tsy mitovy noho izay manome ny ATM, misy ambony kokoa saran'ny ho an'ny varotra iraisam-pirenena tao GBP sy ny USD.
Ny vidin-javatra dia tsy bitcoin natakalo amin'ny Premium be sy ny dia asao / tolotra sisiny hoe mahay mandanjalanja. Ohatra, Cryptopay nanatitra BitCoins for 775.84 - 783.49 USD dia asao-manontany, raha ny vidiny dia BTCUSD 785.94 amin'ny Coinbase sy 779.67 amin'ny Bitstamp.
Misy maro ny sarany izay ampiharina ho an'ny fampiasana sy entana ny debit Cryptopay karatra.
Cryptopay Plastic voaloa vola mialoha Card – Price sy ny Fees
Card vidiny sy ny vidy
Card Price € 15.00 £ 15.00 $15.00
Standard maneran-tany lahateny Free Free Free
Express maneran-tany lahateny € 70,00 £ 50.00 $75.00
Domestic ATM barotra 2.25 € £ 1,75 $2.50
ATM raharaham-barotra Iraisam-pirenena 2,75 € £ 2.25 $3.50
Raharaham-barotra Foreign saran'ny 3% 3% 3%
Fanompoana isam-bolana saran'ny 1.00 € £ 1.00 $1.00
Loading saran'ny 1% 1% 1%
Zavatra antoko Loading saran'ny 1.99% 1.99% 1.99%
Cryptopay Virtual voaloa vola mialoha Card – Price sy ny Fees
Card Price 2.50 € £ 2.50 $2.50
Raharaham-barotra Foreign Saram- 3% 3% 3%
Cryptopay ny tranonkala manana milamina, tafaray manga maso. Ny Fikarohana dia somary mahitsy eo amin'ny toerana.
Ny fisoratana anarana ihany no maka iray minitra. Rehefa avy manome ny anarana, adiresy mailaka sy ny teny miafina, mpampiasa dia afaka Good ho any an-sehatra. Mba hanamarinana ny mpampiasa kaonty dia tsy maintsy hanolotra ny governemanta ID namoaka karatra (pasipaoro, ID-pirenena na ny fahazoan-dalana mitondra fiara) ary ny porofo ny ponenana. Fa porofon'ny ponenana banky fanambarana, utility volavolan-dalàna, hetra na ny governemanta hiverina namoaka taratasy fanamarinana ny honina izay ankasitrahana. Verification maka ora vitsy monja.
Aorian'ny fidirana, mpampiasa dia afaka mijery ny fifandanjana ny tantara. tsirairay vola (EUR / GBP / USD) omena ny adiresy izay misaraka bitcoin ny mpanjifa dia afaka hampidiran'izy ny bitcoin mizana. Misy misaraka levitra noho ny famindrana vola bitcoin adiresy, fa Loading sy mampidina entana avy karatra. Ny mizana dia azo misintona ny iray hafa, na kitapom-batsy bitcoin ny kaonty banky mifandray eo ambanin'ny fizarana Send. Anarana vakizoro ny mpampiasa aoka isika mba hanasa namana ho amin'ny fanompoana mba hahazoana ny 10% fidiram-bola anjara raha ny namana afaka mampiasa Cryptopay debit karatra ho 25% fihenam-bidy.
Raha misy fanontaniana hitsangana, misy fikarohana miasa ao amin'ny fizarana FAQ. Cryptopay velona ihany koa dia manolotra fanohanana amin'ny chat raha misy olana tsy azo vahana amin'ny alalan'ny mailaka.
Ireo mpampiasa toa tia Cryptopay be dia be. Izy ireo hidera ny raharaham-barotra hevitra miaraka amin'ny tranonkala. Ny hany ratsy feedback voalaza dia hoe ny mpanjifa fanohanana UK asa eo Fiozao ara-potoana ihany no mety ho aretin'andoha ho an'ny mpanjifa vahiny.
Cryptopay Account fetra
Sarobidy ny aterineto fifanakalozana
Unverified / voamarina €1,000.00 / manam-petra £800.00 / manam-petra $1,000.00 / manam-petra
Zavatra antoko misy entana
Unverified / voamarina No / Eny No / Eny No / Eny
Max tokana ambony-up danja
Unverified / voamarina €1,000.00 / € 10,000.00 £800.00 / £ 8,000.00 $1,000.00 / $10,000.00
Max isan'andro entana
Unverified / voamarina €1,000.00 / € 20,000.00 £800.00 / £ 16,000.00 $1,000.00 / $20,000.00
Max androm-piainany entana
Max androm-piainany notaterina
Unverified / voamarina 2 / manam-petra 2 / manam-petra 2 / manam-petra
Cryptopay.me efa naorina tamin'ny Oktobra 2013 miaraka amin'ny tanora roa mafana fo bitcoin. George Basiladze manan-MSC amin'ny fitantanam-bola, nanana traikefa mpandalina fikarohana maromaro amin'ny Rosiana fampiasam-bola amin'ny orinasa iray in-lalina ny fahalalana ny rafitra ara-bola. Dmitry Gunyashov manana 7+ taona tantara amin'ny fananganana e-varotra orinasa sy nahavita soa aman-tsara ny asa fampandrosoana ny rafitra fandoavam-bola maro tany aloha. Ny orinasa foibe dia monina ao London, ry zalahy ireo ny fitantanana ny raharaham-barotra avy any UK amin'izao fotoana izao. Ny orinasa dia efa namoaka mihoatra ny 37,000 debit karatra, zareo dia manana 167,000 mpampiasa mavitrika-teny ny sakany, izay mitarika 100,000 varotra isam-bolana amin'ny Cryptopay ny tolotra.
Ny soa azo avy Cryptopay lehibe indrindra dia ateriny asa lehibe nandritra ny telo vola EUR, GBP sy ny USD ka dia nandefa karatra maimaim-poana ny VISA izao tontolo izao-ny sakany. Ny tranonkala dia nanorina an'i natao tsara. Na dia izany aza, satria ny vidin-javatra mihoatra noho ny fandaharam-potoana dia kely eo ho eo raha oharina amin'ny mpifaninana, mpampiasa dia tokony hihevitra na dia hampiasa vola sy telo na mendrika ny hanao izany amin'ny alalan'ny Cryptopay.